စေတနာအရင်းတည်၍ လူထုကူညီရေးလုပ်ကြမည် | Local Resources Centre
ဒေါ်စန္ဒာမြင့်သည် အစိုးရရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရအလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ထားဝယ်ဥပဒေပညာရှင်များအသင်းဟူသော ပရဟိတအဖွဲ့တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ ထားဝယ်ဥပဒေပညာရှင်များအသင်းသည် လူတိုင်းအတွက် အခွင့်အရေး (Right For All) စီမံကိန်းဖြင့် ကလေးသူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးအမှုတွဲများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးလျက်ရှိပါသည်။
ထားဝယ်ရှေ့နေများအသင်းသည် ၂၀၁၁ခုနှစ်၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သူမသည် အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်ကတည်းမှ ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယင်းအသင်းသည် ငွေရေးကြေးရေးမတတ်နိုင်သော အမှုသည်များကို အခကြေးငွေမယူဘဲ အမှုလိုက်ပေးသည့် အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုတွင် လူတိုင်းအတွက်အခွင့်အရေး (Right For All) စီမံကိန်းမှ ရံပုံငွေဖြင့် ကလေးသူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ အမှုတွဲများကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ပြည်သူလူထုအား ဥပဒေပါ အကြောင်းအချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း အသိပညာပေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အမှုတွဲများမှာ သက်ငယ်မုဒိန်းမှု ၊ ကာမလိမ်လည်မှု စသည့် အမှုတွဲများဖြစ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ခိုးမှု နှင့်ပတ်သက်သော အမှုတွဲများကိုလည်း တိုးချဲ့၍ ဖြေရှင်းပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် သူမသည် အစိုးရရှေ့နေအလုပ်ကို အခကြေးငွေယူ၍ လုပ်ကိုင်ပြီး ပရဟိတအနေနှင့် အခကြေးငွေမယူဘဲ ထားဝယ်ဥပဒေပညာရှင်များအသင်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ အမှုတွဲများ ရရှိလာပုံမှာ “ကလေးသူငယ်အမှုတွေရှိလားဆိုပြီး အစ်မတို့ကနေပြီးတော့ သွားမိတ်ဆက်ထားတယ်လေ။ အဲ့ဒီလိုပေါ့နော် ကလေးသူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးအမှုရှိရင် အကြောင်းကြားပေးဖို့ကိုလည်း ပြောထားတယ်ဆိုတော့ သူတို့ကနေပြီးတော့ အကြောင်းကြားပေးတယ်။” ဟု ဒေါ်စန္ဒာမြင့်မှ ဖြေကြားခဲ့သည်။
လတ်တစ်လော၌ သူမသည် သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတစ်ခုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလျက်ရှိပြီး အမိန့် ချမှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ အမှုမှာ ၆နှစ်သား မိန်းကလေးအား အဘိုးဖြစ်သူမှ အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်မှုဖြစ်ပြီး တရားခံဖြစ်သူ အဘိုးအား အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရပါသည်။ ကလေးသူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးအမှုတွဲများဖြစ်သည့်အတွက် အမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ကြန့်ကြာမှု ၊ ခက်ခဲမှုသိပ်မရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
Daw Sandar Myint who isagovernment employee provides voluntary services in Dawei Lawyer Group (DLG) which isacharity organization giving technical support and awareness training to the people of Dawei. Recently, DLG received small grant from EU funded Project-Rights for All (RFA) project and working on promoting the rights of children and women.
Daw Sandar Myint has been actively participating in Dawei Lawyer Group for many years. The group helps people who are in need of technical support but not able to afford financially. Among many cases they are working on, there are several rape cases and violence against women.
“We have made good connection with the jurisdiction and they inform us of the cases that need our support. That’s how we get information” said Daw Sandar Myint.
Recently, there was an attempted rape case which had been solved. The victim is six years old girl and the perpetrator is her grandfather. Daw Sandar Myint had positively contribute toward handling this case.